Maalinta: Maarso 28, 2020
Sida ku xusan qoraalka uu ku soo qoray Gudoomiyaha Magaalada Istanbul Cali Yerlikaya barta twitter-ka, in la mamnuucay adeegsiga codsiyada sida Bla-bla-car iyo in gaadiidleyda dhexmara laga mamnuuco tagsi iyo gawaarida la midka ah. Magaalooyinka Maamulka Magaalada Istanbul sida soo socota: [More ...]
Sida ku cad qoraalka daqiiqada ugu dambeeya ee Gudoomiyaha Magaalada Istanbul Cali Yerlikaya, caruurta ku nool Istanbul looma qaadi doono suuqyada iyo meelaha suuqyada lagu iibiyo. Si looga hortago muwaadiniinteenna inay carruurtooda kula noolaadaan suuqyada iyo goobaha suuqyada, [More ...]
Marka loo eego tirooyinka lagu shaaciyey websaydhka Wasaaradda Caafimaadka, warbixinta Coronavirus ee ku taariikhaysan 28.03.2020 waa sida soo socota: Guud ahaan, 55.464 baaritaan ayaa la sameeyay 7.402 xaaladood oo toganna waa la helay. Waxaa jira dhimashada 108 iyo 445 qof oo ku jira daryeel culus. [More ...]
ANATOLIS DIAGNOSIS iyo BIOTECHNOLOGY: Shirkadda, oo soo saarta Tuzla, waxay ku ogaataa fayraska corona ee sanballadaha neef-mareenka aadanaha iyadoo ay la socoto xirmada baarista 'Bosphore Coronavirus' (2019-nCoV) oo ay soo saartay. PCR-waqtiga-dhabta ah, oo ah sheyga shirkadda oo leh afar dalab patent ah [More ...]
IETT sidoo kale waxay ku dhejineysaa calaamadaha dhejiska ee ay u diyaarinayso inay joogteyn masaafo amaan ah ay ku yeelato Metrobus iyo basaska meelaha sugitaanka ee Metrobus istaago ka dib gaadiidka dadweynaha. Covid - saamaynaya adduunka - waxaa laga qaaday 19 masiibo [More ...]
Sida ku xusan wareegtada ay soo saartay Wasaaradda Arimaha Gudaha, gawaarida dadweynaha ayaa qaadi kara 50 boqolkiiba awooda lagu sheegay shatiga. Agaasinka Guud ee IETT, kaasoo qiimeeya dhammaan xarumihiisa iyo duulimaadyadooda oo dhan, Fleet Tracking [More ...]
Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha dhaqaalaha Adil Karaismailoğlu, khudbaddiisa ayuu ka sheegay xafladdii wareejinta ee lagu qabtay Wasaaradda, dhammaadkii Sebtember iyada oo lagu taageerayo Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan iyo Wasiirka Mudane Cahit Turhan. [More ...]
Kahramanmaraş Dawlada Hoose ee Magaalo Weynaha waxay Bilowday Kahortag ku saabsan Kahortaga u adeegsiga Gaadiidka Dadweynaha iyada oo la eegayo baaxadda coronavirus. Kahramanmaraş Dawlada Hoose ee Magaalada Caabudwaaq ayaa laga qaaday talaabooyinka cudurka coronavirus ee saameeya aduunka. [More ...]
Marka la eego cabirrada coronavirus-ka, Degmadda Trabzon Metropolitan District waxay ku baaqeysaa 'joog guriga' iyo 'Hayde Eve' oo leh nidaamka calaamadaha taraafikada. Dowlada hoose ee magaalada, wacyi gelinta muwaadiniinta inaysan ka bixin guriga ilaa ay ku qasban yihiin cudurka cudurka coronavirus [More ...]
Shaqaalaha caafimaadka ee Antalya waxay ka faa'iideysan doonaan adeegyada gaadiidka dadweynaha lacag la’aan. Iyada oo la raacayo tilmaamaha Duqa Magaalada Antalya ee Magaalada Muhittin Böcek, shaqaalaha caafimaadka waxaa la tusi doonaa kaararka rasmiga ah ee Dowlada Hoose iyo nidaamka tareenka iyagoo muujinaya kaararka shaqaalaha. [More ...]
Dawlada Hoose ee Magaalada Mersin waxay sii wadaysaa dadaalkeeda kahortaga cudurka faafa ee magaalada oo dhan lagana hortago cudurka loo yaqaan 'coronavirus' kaasoo ku faafa dunida oo dhan. Kooxaha Magaaladu waxay ku yaalliin Mersin Intercity Bus Terminal maalmihii ugu dambeeyay ee safarrada udhaxeeya cudurka daacuunka 'coronavirus'. [More ...]
Dawlada Hoose ee Magaalada Kayseri waxay sidoo kale diyaarisay gaadiid dadweyne masaafada bulshada ee ay tahay in la raaco daqiiqad kasta oo nolosha ah khatarta cudurka 'coronavirus'. Marka la eego, nidaamka fadhiyada isku-midka ah ayaa lagu soo rogay nidaamka tareenka iyo basaska. coronavirus [More ...]
Howlaha Metro ee sanadkii 2017 iyo dhismaha wadada ee sanadka 2018 ayaa loo joojiyay gaadiid la geeyay Isbitaalka Magaalada Başakşehir. Kulankii lagu qabtay Magaalada Istanbul ee Maamulka 25-ka Diseembar 2019, waxaa lagu cadeeyay in wadooyinka halista ah ee Isbitaalka Başakşehir ay yihiin mudnaanta koowaad. iyo [More ...]
Si loo kordhiyo u nugulnaanta halista cudurka corona ee degmada Elbistan ee Kahramanmaraş, dadka ku nool degmada ayaa looga digayaa inay yihiin 'Nee, arag', 'gurigaaga tag' oo guryahooda 'joog'. Fayras Corona [More ...]
Lane Fogaanta Bulshada ayaa loo Qaaday Basaska iyo Gawaarida Gaziantep; Gaziulaş, oo gacansaar la leh Magaalada Gaziantep ee Magaalaga Weyn, waxay hirgalisay nidaam xariijin ah oo lagu ilaalinaayo masaafada basaska iyo rakaabka. Kuraasta rakaabka, ”Rakaabka qaaliga ah. Caafimaadkaaga [More ...]
Tender Tram Tilmaamaha Dhiigga ee Sakarya ayaa la dhigay Coronavirus; Qandaraaska loogu talo galay dhismaha wadada tareenka laga dhisayo inta u dhaxaysa Masaajidka Cusub iyo Beerta Qaranka ee Sakarya ayaa dib loo dhigay taariikh dambe iyada oo la eegayo cabirka coronavirus-ka. Waxaa qoray Sakarya Metropolitan Dowlada Hoose [More ...]
Dakhliga ka yimaada buundooyinka iyo jidadka waaweyn bishii Febraayo waxay ahayd 186 milyan 252 kun 186 rodol. Sida ku cad xogta Agaasinka Guud ee Wadooyinka, laga soo bilaabo buundooyinka July 15 Martyrs iyo Fatih Sultan Mehmet ee Istanbul bishii Febraayo. [More ...]
Bursa Teleferik A.Ş. Bayaanka lagu soo dhigay akoonnada warbaahinta bulshada, waxaa lagu dhawaaqay in baaritaanka cudurka 'corona virus' ee gudoomiyaha guddiga İlker Cumbul uu ahaa mid togan. Bayaanka la soo saaray, “Sida la ogaadey, cudurka la xakameeyo, [More ...]
Turkey Railway Machines Industry Inc. in Sivas (TÜDEMSAŞ) soo saaray 22 "New Generation Freight baabuur" socday Austria in loo dhiibo. Jarmalka, Ingiriiska, Netherlands si ay u helaan gawaarida fududeeya xamuulka xamuulka [More ...]
Wasiirka Ganacsiga Ruhsar Pekcan wuxuu cadeeyay inay ku dhaqmayaan "ganacsiga ajnabiga ah ee aan lala xiriirin" marka loo eego talaabooyinka laga qaadayo nooca cusub ee cudurka 'coronavirus' (Kovid-19) wuxuuna yiri, "Waxaan gaarnay guulo culus oo tusaale u noqon doonta adduunka oo dhan. ganacsiga [More ...]
Konya degmada Metropolitan, dillaacay of coronaviruses in shaqada caafimaadka muwaadiniinta Tan iyo maalintii ugu horeysay waxa ay bilaabeen in lagu arko ee Turkey sii aan guraynin. Dowlada Hoose ee Magaalada Konya, iyadu marka la eego baaxadda Qorshaha Tallaalka Faafida, maanta waxay ku taal xarunta iyo 28 degmo [More ...]
Qorsheynta Gaadiidka Dawladda Hoose ee Magaalada Konya iyo Waaxda Nidaamka Tareenka, iyada oo la raacayo qaab-taxaddarrada ay qaadanayaan wasaaradaha ay quseyso iyo Maamulka si loo sii wado dagaalka ka dhanka ah dillaaca coronavirus ee dhammaan aagagaga si guul leh. [More ...]